सूचना र मनोरञ्जनको संगालो - साप्ताहिक
क्यान्सरलाई कसरी जित्ने ? - Dr. Arun Shahi (क्यान्सर रोग बिशेषज्ञ, पाटन अस्पताल)
लकडाउनले कस्तो मानसिक समस्या देखाउदै छ ? Ram Pukar Shah (चिकित्सक मनोविद, कान्ति बाल अस्पताल)
गर्मीमा छालामा देखिने समस्या र समाधान ll Dr. Aparna Shah Summer Skin Care
टिकटकमा छोरीहरुसंग रमाउदैं पूर्व अधिराजकुमारी हिमानी शाह ll Himani Shah in Tiktok with Daughter
योगका अनौठा आसन
सुरु भयो रोपाईंको चटारो
फर्किए नेपाली चेलीहरु
कृष्ण आचार्यअसार ११, २०७७
सामूहिकता रङ्गमञ्चको पहिलो सर्त हो । कोरोना महामारीले यसैमा पहिलो प्रहार गरिदियो । सामाजिक दूरी कायम गरेर रङ्गमञ्च कसरी सम्भव होला ? कहिले फर्केलान् रङ्गमञ्चमा दर्शक ?
समर्पण श्रीअसार १०, २०७७
अहिले फिल्म क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद, गुुटबन्दी र डिप्रेसनको मुद्दा उठिरहेका बेला मंगलबार पलले आफ्नो फेसबुकमा लामो स्टाटसहित प्रश्न गरे, ‘के तपाईंले परिश्रम गरेअनुसार समयमा आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाइराख्नुभएको छ ? के तपाईंले आफूले गरेको फिल्मको पैसा पाउन वर्षौं–वर्षसम्म डिरेक्टर, प्रोड्युसरसँग दुुई हात जोड्नुपरेको छ ? ’
अनिल यादवअसार ९, २०७७
कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो चलचित्र क्षेत्र । तर यसले चलचित्र क्षेत्रलाई जति चुनौती दिएको छ, त्यति नै अवसर पनि । दयाराम दाहाल, रेखा थापा, आकाश अधिकारी, रविन्द्र खड्का, अनुप बराल, माओत्से गुरुङ र निकेश द्धालाई सुन्दा यस्तै लाग्छ ।
राजाराम पौडेलअसार ८, २०७७
महामारीका कारण हल रिलिज रोकिएपछि नेपाली सिनेमा निर्माता भरपर्दो डिजिटल विकल्पको खोजीमा देखिन्छन् । तथापि जति पनि विकल्प उपलब्ध छन्, त्यसलाई ढुक्क भएर प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाचाहिँ बनिनसकेको उनीहरूको मत छ ।
अनिल यादवअसार ५, २०७७
कृष्ण आचार्यअसार ४, २०७७
कृष्ण आचार्यअसार २, २०७७
अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुुतको आत्महत्यापछि बलिउडमा मात्रै होइन, नेपाली सिनेमा उद्योगमा पनि नातावाद व्याप्त रहेको बहस चलिरहेको छ । सुशान्त डिप्रेसनमा जानुमा बलिउडको नातावाद खास दोषी रहेको चर्चासँगै धेरैले कलिउडको नातावाद र यसले पारेको प्रभावबारे बहस हुँदैछ ।
अनिल यादवअसार २, २०७७
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आफ्नै निवासमा आईतवार आत्महत्या गरेका छन् । उनले आत्महत्या गर्नुको कारण नखुले पनि उनी पछिल्लो केही महिना देखि डिप्रेसनको शिकार भएको बताईएको छ । यसकै कारण उनले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक वयान दिएका छन् ।
साप्ताहिक संवाददाताजेष्ठ ३२, २०७७
मेला–महोत्सव र देश–विदेशको स्टेज कार्यक्रमले आम्दानीको ग्राफ बढाइरहेका लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकार कोभिड–१९को महामारीपछि चिन्तित छन् । भविष्यको चिन्ताले विकल्पको सोचमा उनीहरूलाई धकेलेको छ ।
राजाराम पौडेलजेष्ठ २९, २०७७
हाम्रो इ-पत्रिका अन्लाईन पढ्नुहोस् ।
विश्वकप छनोटका खेल चार महिनापछि गराउने प्रस्ताव
हङकङका स्थायी बासिन्दालाई राहतस्वरुप १० हजार डलर
यस्तो पो क्वारेन्टीन !
'कोरोना भन्दैछ- प्रकृति दोहन रोक'
म पनि पागल हुँदै छु कि ?